Hawsha aqbalka - Sumy National University Deedna
Si aad u hesho ah warqad martiqaad ka Sumy National University Deedna we require the following documents:
Copy of Bachelor Degree (haddii ardayga codsanaya heerka Master ee)
Waxaad noo soo diri kartaa waraaqaha by email ama via Codso qaab online.
Waxaad lacag na si ay u gudbiyaan karo by Transfer Bank, Western Union or by MoneyGram.
Ka dib markii la helo warqadaha iyo lacag bixinta. Waxaan kuu soo diri doonaa warqad martiqaad, Warqad gelitaanka iyo warqad taageero fiisada dhiibay warqaadayaal.
Ka dib markii warqad martiqaad ka Sumy National University Deedna students should contact the Safaaradda ama Qunsuliyadda Ukraine ee kuugu dhow.
Ardayda la xiriiri kartaa xafiiska wakiilka naga maxalliga ah ayaa sidoo kale wixii macluumaad ah fiisaha oo ay caawin doona ardayda ay visa. Ardayga waa in lagu dabaqaa Yukreeniyaan safaaradda la dokumentiyada soo socda:
Original international passport (sax ah muddo hal sano ah)
Higher Secondary School certificate (turjumay luqada Yukreeniyaan)
Ka dib markii fiisaha ka Yukreeniyaan Safaaradda ama Qunsuliyadda helitaanka, ardayda waa in ay noo soo sheegtaa ku saabsan / faahfaahinta iyada diyaarad uu la yimid taariikhda iyo waqtiga. Mid ka mid ah wakiillada naga heli doonaa ardayga garoonka diyaaradaha. In kiiska ardayga ma noo sheegi doonaa ah oo ku saabsan isaga / iyada la yimaado, isaga / iyada loo celin doonaa soo tarxiilay in dalkiisa.